ကိုယ့်ကိုကိုယ်လည်း**သ**ရတယ် ငါ အိုနေတာ မေ့၍ မေ့၍ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » ကိုယ့်ကိုကိုယ်လည်း**သ**ရတယ် ငါ အိုနေတာ မေ့၍ မေ့၍	17
ကိုယ့်ကိုကိုယ်လည်း**သ**ရတယ် ငါ အိုနေတာ မေ့၍ မေ့၍
Posted by သော်ဇင် (လွိုင်ကော်) on Apr 21, 2015 in Creative Writing, Drama, Essays.. | 17 comments
ဟဲ့ ထ ထ မျက်နာသစ်သွားတိုက်ရမယ်။ ပြီးရင် ပြီးရင် သြော် အိမ်သာတက်ရမယ်။ ၀မ်းကလွယ်တော့လမ်းမှာ ဒုက္ခရောက်ရင်မလွယ်။ ပြီးတော့ ပြီးတော့ အင်း လက်ဆေး။ ကော်ဖီဖျော်။ ဘီစကစ်လေးပါးစပ်ထဲတစ်ချက်ပစ်ပြီး လျှာလေးနဲ့မွှေ။ စားသောက်သောက် မြန်မြန်လုပ်ပြီးတော့ အလှပြင် ပြင် အင်း မနေ့ညက မီးပူတိုက်ထားတဲ့ ဒီနေ့မနက်ဝတ်မယ့်ဝတ်စုံသုံးစုံ အဲဟုတ်ဖူး တစ်စုံ နှစ်စုံက ရွေးလို့ရအောင် အရံထား ကိုယ်နဲ့ကပ်လိုက်ခွာလိုက်။ နံရံကပ်မှန်ပေါ်က ကိုယ့်ခန္ဒာကိုယ် လေးဆယ့်ရှစ်ပတ်လောက်ကပ်လိုက် ခွာလိုက် လှည့်ပတ်ကြည့်။ စိတ်တိုင်းကျရွေးပြီး ၀တ်လိုက်တော့ တစ်ခုလိုသေးတယ် အဲ အဲဆိုမှ မိတ်ကပ်ပြင် နှုတ်ခမ်းညို အိုတွဲတွဲကို အနီဆိုးရမလား အညိုဆိုးရမလဲလို့ စဉ်းစားရင်းလွန်ဆွဲ။ အနီရောအညိုပါစပ်ဆိုးလိုက်တော့ အလှတို့စိုရွဲသွားသလိုလို အို မျက်တောင်လေးကို ပေကလပ် ပေကလပ်ခတ်ကြည့် ဆွဲဆောင်မှုရှိရဲ့လား ပြန်ညှိ မာစကာရာကိုတင်ဖို့ မေ့၏။
အရေးထဲ မျက်ခန်းထောင့်စွန်း ကျီးခြေလေးတွေကရေးရေးလေးပေါ် ပေါ် ပေါ်ဦးဟဲ့ဆိုပြီး ခရင်မ်ပတ်ကလေးနဲ့ဖို့ဖို့။ ဒုက္ခ ဒုက္ခ မျက်ခုံးမွေး ကျိုးတိုးကျဲတဲကိုဖြည့်ဖို့ မေ့ဦးဟဲ့ဆိုပြီး ခဲတံလေးနဲ့ဖိဖိဆွဲပြီးတော့ သြော် သြော် ဆံပင် ဆံပင် ဖြန့်ချရမလား။ ထုံးသွားရမလား နိုးနိုး မာမီခေါက်ဆွဲလိုအခွေလိုက်လေချတာ လှ လှလို့ တစ်နေ့ကဆိုကျ အဲ အဲတော့မှ လတ်ဆတ်နေတဲ့အဖြစ်နဲ့ အပြင်မှာပူတယ်ဆိုတာသတိရ။ မျက်မှန်လေးလည်းထုတ်မှ။ အညိုတပ်မလား အနက်တပ်မလား ရွေး ရွေး မြန်မြန်ရွေး အို ဒီအနက်ပဲကောင်းတယ် အယ် အယ် ဘေးလွယ်အိတ် ဘေးလွယ်အိတ် အညို အနီ အဖြု ဘယ်တစ်လုံးလွယ်ရမလဲ စဉ်းစား စဉ်းစား ၀တ်စုံက အနီဆိုတော့ အနီလေးပဲလွယ်မယ် ။ ဟင် ဖိနပ် ဖိနပ် အရပ်ကပုတော့ အမြင့်စီးရမလား ရွေးရွေး မြန်မြန်ရွေး ဒီ ဒီအနီလေးရွေး။
ရွေးပြီးတော့ ဟယ် ဒါ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် အလှပြင်ပြီးတာ ဘယ်မလဲ ကင်မရာ ကင်မရာ ဟုတ်ပါ့။ စားပွဲပေါ်မှာ။ အိုကေ 360 နဲ့ရိုက်ရမလား။ နိုးနိုး ရိုးရိုးရိုက်။ ကဲ ၀မ်း တူး သရီး ဖိုး ဖိုက် ချကလပ် တစ်ပုံ နှစ်ပုံ သုံးပုံ Save။ အင်း ဖွင့်ဖွင့် အင်တာနက်ဖွင့်။ ဟော ဟော တက်ပြီး E, H , ဟယ် H+ ရပြီ။ ပုံတွေ ပုံတွေ ဒီမေးစေ့လှတယ် အဲ အလင်းနည်းနည်း မှောင်တယ်။ ပြင်ပြီး တင်ပလိုက်မယ် ကဲဟယ်။ ဟယ် Upload Complete ရပြီ ရပြီ။ ဖွင့်ကြည့်။ ဟော ဟော ၀မ်းလိုက် တူးလိုက် သရီးလိုက်။ သြော်မေ့လို့ ပုံထဲစာမထည့်လိုက်ရ။ တွေ့ပြီ တွေ့ပြီ မမ လှတယ် တဲ့ Comment ။ ပြန်ပြောလိုက်တယ် သိုင်းကျူး ဆစ်လေး အို နောက်ကျပြီ နောက်ကျပြီ ထွက်ထွက် မြန်မြန်ထွက်။ ထွက်ဆို ဘေးလွယ်အိတ်ထဲစုံပြီးလား ဟဲ့ ဆိုကြည့် ဖုန်း ပိုက်ဆံ မိတ်ကပ်ဗူး ဘီး စုံပြီ စုပြီ။
ဖုန်းလေးကိုိပိတ်ပြီး အပြင်ထွက်။ မှတ်တိုင်မှာ မတ်တပ်ရပ်။ တွေ့တဲ့ကားပေါ်ကောက်တက်။ နေရာတစ်နေရာရမလား ဖင်နဲ့တွန်းဝင် ဟောဟော ထိုင်လို့ရပြီ ရပြီ။ သက်ပြင်းလေးမှုတ်ထုတ် ဖုန်းလေးဖွင့်ပြီး အွန်လိုင်းဖွင့် ချက်ချင်း ကောက်တင်လိုက်တယ် ကားကြပ်တယ် ဖီလင် စိတ်ပျက်။ အော်ပြီ အော်ပြီး မှတ်တိုင်နီးပြီး ဆင်းဆင်း။ မြန်မြန်ဆင်း။ ဆင်းလိုက်တာနဲ့ ဘွားခနဲမြင်ကွင်း ဘုရားစေတီရွှေဝင်းဝင်း။ ပတ် ပတ် သုံးပတ် ပတ် ပြည့်ပြီးဆို ၀ယ်လာတဲ့ စံပယ်ကုံး မွေးနံ့ထောင့်ကဘုရားကပ် သြော်အရေးထဲ ရေသပါယ်ဖို့ မေ့တော့မလို့။
ဟုတ်သား လိုင်းပေါ်တက်ပြီး ဘုရားရောက်ကြောင်းလေး တင်တင် ပြီးတော့မှ မြန်မြန်ဦးချ ဆင်းဖို့ပြင်။ ဆုတောင်း ဆုတောင်း ဘုရားတပည့်တော် စိတ်ပျိုကိုယ်နုပါစေကြောင်း တောင်းတောင်း။ အာရုံထဲမှာလည်း မမ လှတယ်ဆိုတဲ့ Comment ကကောင်းမှကောင်း။ ပြီးတော့ အသာထ ပြန်မယ် ပြန်မယ်။ မြို့ထဲဝင် အအေးသောက်။ အမောပြေသောက်ပါဦးလား လိုင်းပေါ်ရောက်။ ဒီတော့မှ သွေးနားထင်ရောက် အနားကပ်တဲ့ကလေးတစ်ယောက် ပြောပုံဆိုပုံ တစ်ချက်မထောက်။
“အဒေါ်ဂျီး သားဝို မုန့်ဖိုးပေး” တဲ့။
ဒီတော့ ဒိုင်းခနဲထိုး မျက်စောင်းတွေအမျိုးမျိုး ပါးစပ်ကလည်း သေနတ်မျိုးလို ဘယ်လိုကလေးလဲမသိ ငါ့များ အဒေါ်ကြီးတဲ့။ ဟေ့ရှင်းမယ် အအေးဖိုးနဲ့အသုပ်ဖို့ရှင်းမယ် ဘယ်လောက်ကျလဲ ဟုတ်ကဲ့ အဒေါ် ထောင့်နှစ်ရာကျပါတယ်။ လာပြန်ပြီ ဒီအဒေါ် ရော့ ဆို ဆောင့်ထည့်။ ဆိုင်ထဲကအထွက် ဖြတ်သွားတဲ့ လက်တွန်းလှည်းပေါ်က သီချင်းသံက
**မလှဘူးဆိုရင်ငိုချင်တယ်လို့ ပြောပါနဲ့လေး ချစ်သူရယ်**
မဆီမဆိုင် မျက်စောင်းထိုး လှည့်ထွက်။ ပါးစပ်ကလည်း တိုးတိုးလေးရွတ်နေရတယ်။ ဟုတ်တယ် ကိုယ့်ကိုကိုယ် သ ရတယ် သ ရတယ်။ လှအောင် သရတယ်။ မသာလေးတွေရဲ့ ဆဲတုန်းခဏ အနားကဖြတ်သွားတယ်။
**ဟုတ်ကဲ့လား ဒကာ ဒကာမတို့ တစ်နေ့တစ်ခြား အိုလာတာပဲ ရှိတယ် ပျိုလာတာရှိသလား။ မရှိပါဘုရား။ အေး လူတွေက မေ့နေတာ ထမင်းစားပြီး နေ့တိုင်းအိုအိုလာတာကိုသတိမထားမိတာ။ ပိုလှလာတာ ရှိလား ။ မရှိပါဘုရား။ ဒါဆို ဘယ်လမ်းကိုသွားနေတာလဲ။ သေလမ်းပါဘုရား။ လူတိုင်းမသေနိုင်ဘူးလား။ မဟုတ်ပါဘုရား။ ပျိုပျိုအိုအို ဘယ်လမ်းသွားမလဲ သိလား။ သိပါတယ်ဘုရား သေလမ်းပါဘုရား**
အနော်ပြန်လာပါပြီလို့။ အပျော်လေးနဲ့စတင်ပြီး ပို့စ်တစ်ခုတင်ခဲ့ပါတယ်ဗျာ။ နောက်ရက်တွေမှာ ရက်ခြားပြီး ဆောင်းပါးလေးတွေ ၀တ္ထုတိုလေးတွေပြန်လည်တင်ပေးပါတော့မယ်လို့။
သော်ဇင် (လွိုင်ကော်) has written 191 post in this Website..
View all posts by သော်ဇင် (လွိုင်ကော်) →	Blog
Mr. MarGa says: ဖတ်ရင်း
အောင် မိုးသူ says: ဖြည်းဖြည်းလာပါ……..အို…. ဇရာ
လုံမလေးမွန်မွန် says: ငါ မအိုသေး…ဟေး.ဟေး
ခင်ဇော် says: ကွက်တိပဲ အေ။
Alinn Z says: ဒီ စာမူလေးကို အသံထွက် ဝတ္ထုအဖြစ် အသံထွက် ဖတ်ပြမယ့်သူတယောက်ယောက်…
ဟန်နဲ့ပန်နဲ့ ဖတ်ထားတာကိုလည်း နားထောင်ချင်မိ….
ပလို့ ဂျိ…
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14443
kai says: သိပ်မကြာလှတဲ့ကာလမှာ.. ဇီဝသိပ္ပံနည်းပညာနဲ့…လူတွေ…အသက်ပြန်ငယ်လာအောင်လုပ်နိုင်တော့မှာဖြစ်တယ်လို့..သတင်းတွေကဆိုပါတယ်..။
ဘုန်းဘုန်းတို့.. ဘယ်လိုဆက်စခန်းသွားကြမယ်…မသိ..။ =
Reversing Aging: Not as Crazy as You Think
Harvard researchers findanew compound that can make old cells young again
By Alice Park @aliceparknyDec. 19, 2013
What makes cells age? Wear and tear, yes. But biologically, says, Dr. David Sinclair, professor of genetics at Harvard Medical School, it’s lack of oxygen that signals cells that it’s their time to go. Without oxygen, the energy engines known as the mitochondria become less efficient at turning physiological fuel like glucose into the energy that the cells need to function. Eventually, they shut down.
But inapaper published in the journal Cell, Sinclair and his colleagues describe for the first timeacompound naturally made by young cells that was able to revive older cells and make them energetic and youthful again. In an experiment in mice, the team found that giving older miceachemical called NAD for just one week made 2-year-old-mice tissue resemble that of 6-month-old mice (in human years, that would be akin toa60-year-old’s cells becoming more like those belonging toa20-year-old).
naywoon ni says: ဒါ​လေး ဇာတ်​ညွှန်းခွဲပြီး ဒါကျူးမင်​ထရီ ရိုက်​လိုက်​ ဘယ်​နဲ့ ရှိပါ့မလဲ ။ ​ခေါင်းစဉ်​က မြန်​မာပြည်​နဲ့ မိုဘိုင်းဖုန်းလို့​ပေးလိုက်​ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4150
black chaw says: ညီလေး ပို့ စ် လေး ပြန်မြင် ရ
ပြန်ဖတ် ရ လို့ 
ပီတိဖြစ် ရ ပါတယ် ဗျာ။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 224
သော်ဇင် (လွိုင်ကော်) says: ဟုတ် ဘဘဘလက်ခ်ချောရဲ့တောင့်တမှုကြောင့် ကိုယ်ထင်ပြရခြင်းပါ။ ဒီပို့စ်လေးကြောင့်ပြုံးမိရင်ပဲ ကျေနပ်ပါတယ်လို့။
Mike says: .ခေတ်ကိုထင်ဟတ်တဲ့ပို့စ်လေးပါ..အရေးကလည်းသွက်သဗျ…ဖတ်ရင်း ရွာထဲက .လူဒွေကိုမြင်လာမိတာဝန်ခံရမယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1988
Shwe Ei says: -မိန်းမဒွေ လှချင်တာလောက်တော့..အခြောက်တွေက ပျင်းသေးဒယ်ဒဲ့အေ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 280
Courage says: ဟား ဟား ဟား။
padonmar says: ဟယ် အစပိုင်းက ကိုယ့်ကို စောင်းရေးသလားလို့၊
မက်စကာရာ ပါလာတော့..မဟုတ်တော့ မဟုတ်လောက်ပါဘူးလို့။
Ma Ma says: ဟိုတလောကလည်း စာတစ်ပုဒ်မှာ ဖတ်လိုက်ရတာ ၅၀ကျော်ကြီးတွေ သူငယ်ချင်းတွေစုပြီး အလှပြင်ဆိုင်သွား၊ စားသောက်ဆိုင်သွား လမ်းသလားနေကြတာကို…
၅၀ကျော်မမကြီးတွေ ဖလမ်းဖလမ်းထနေတယ်လို့ ပြန်ရေးထားတာ ကိုယ့်များစောင်းပြောနေသလား မှတ်ရတယ်။
ကိုယ်တွေလည်း ကိုယ့်ထက်ငယ်တဲ့သူတွေနဲ့ သူငယ်ချင်းပေါင်းပေါင်းပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ်ကလေးထင်နေတာ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 224
သော်ဇင် (လွိုင်ကော်) says: စိတ်ထဲရှိနေတာရယ် မြင်နေရတာရယ်ကို ချရေးလိုက်ရုံပါကွယ်။
Wow says: ဟယ်… နာမြန်းးးလားးး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4812
မွသဲ ( 17082011 ) says: ဝင်ဝင်ချင်းအမောပြေရီဆေးလေးကျွေးသွားတယ်
Comments By Postကျွန်တော်နဲ့ Dead Body (0:1) - ko six - etoneခရီးသွားတဲ့အခါ ကိုယ့်ပစ္စည်းတွေကို လျင်မြန်လွယ်ကူစွာ ထုတ်ပိုးနိုင်ဖို့ သိထားရမယ့် အချက် (၁၅) ချက် - သျှားသက်မာန်ဇလုံတောင်ဘုရား မရောက်ဖူးသေး သူများနှင့် ဘုရားသမိုင်း - သျှားသက်မာန်သူမတူတဲ့ မိန်းမသားများအဖြစ် ရပ်တည်နိုင်ရန်အတွက် - သျှားသက်မာန်ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံး ၈ ဦး - သျှားသက်မာန်ကျိုက်ထီးရိုးဘုရားကိုနေ့ ချင်းပြန်စရိတ်ငြိမ်းနဲ့ သွားကြမယ် - etone - သျှားသက်မာန်အဝင်ကော - ko six - Thint Aye YeikMarijuana - ဆေးခြောက် - Thint Aye Yeik - kaiအရောင်ရင့်မှတ်တမ်း - ဇန်န၀ါရီ ၂၀၁၇ - kai - kaiကဗျာဆန်ဆန်လှချင်တိုင်းလှနေတဲ့...ကဗျာဝကမ်းခြေ (or) အပျိုစင်ကမ်းခြေ - သျှားသက်မာန် - Thint Aye Yeik''ဤ''ကို ခပ်လွယ်လွယ်--ကျွဲချင်သူတွေ များလွန်းတော့လည်း... - Thint Aye Yeik - Thint Aye Yeik၀မ်း ဗိုက် ပြားချက်နေဖို့ မနက်ခင်း တိုင်းစားပေးသင့်တဲ့ အရာ - သျှားသက်မာန် - Thint Aye Yeikထူးမြတ်သောသွေးလှူခြင်း - aye.kk - etoneမြသပိတ်ရေပြာအိုင် - သျှားသက်မာန် - Ma Eiဖွင့်မရတဲ့ ဦးနှောက် - ဂျစ်စူ - Thint Aye Yeikချစ်ခြင်းမေတ္တာတရား - ဂျစ်စူ - aye.kk" အငုံ့စိတ် " - ဂျစ်စူ - Thint Aye Yeikအယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း - ဇန်န၀ါရီ ၂၀၁၇ - အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် - ဂျစ်စူကဗျာလေး မူးနေပြီ - aye.kk - အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက်နာဂတောင်တန်းတွေဆီက ပျံ့လွင့်လာတဲ့တေးသွားများနဲ့နှစ်ကူးပွဲတော် - သျှားသက်မာန် - အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက်ယာဉ်အို စက်ဟောင်း ထိန်းမောင်းနေကြတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် - အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် - Thint Aye Yeikဘီယာသောက်တဲ့ ပုဇွန် - အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် - ဇီဇီစာပေတိုက်ပွဲခေါ်သံ(၂)-NEO-CLASSICISM တွေ ထွက်ခဲ့ဟေ့ - Thint Aye Yeik - ဂျစ်စူချစ်ခြင်းပုံပြင် နိဒါန်း - sorrow - CrystallineThe Sense of Traveling - sorrow - sorrowဖွဲတစ်ဆုပ်... - sorrow - ဦးကျောက်ခဲခရီးသွားခြင်းကသင်ပေးသည့်အရာများ ******************************************* - သျှားသက်မာန် - Thint Aye Yeik"ပြည့် " - aye.kkစာပေတိုက်ပွဲခေါ်သံ(၁)- မျှစ်ကြော်ရဲ့လက်သီးချက်ကို မြည်းစမ်းခြင်း - Thint Aye Yeik - ဇီဇီ​မွေး​နေ့ဆိုတာ - Thint Aye Yeikအလင်းဆက် ကျိုက်ထီးရိုးသွားတုန်းက.... - Thint Aye Yeik - အလင်းဆက်ကျိုက်ထီးရိုး ကေဘယ်ကား - သျှားသက်မာန် - Darli May Ayeအပျော် - ko six - အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက်" ၁၆ အလွန် ၁၇ " - Darli May Ayeစည်းကမ်းတဲ့လား...လိုက်နာချင်စိတ်က အဓိက... - kai - Thint Aye Yeiki carry your heart with me (i carry it in - ၀င့်ပြုံးမြင့် - uncle gyiကမ္ဘာမြေဆွဲအား ကို ဆန့်ကျင် ထွန်းပနေတဲ့ ဆံတော်ရှင် ကျိုက်ထီးရိုး .. - ၀င့်ပြုံးမြင့် - Thint Aye Yeikအင်္ဂလိပ်သဒ္ဒါတတ်ကျွမ်းလိုသော် - (၉) ပါမောက္ခမျိုးကျော်မြင့် - သျှားသက်မာန် - Thint Aye Yeik🌲🌲🌲တိမ်ပင်လယ်ပေါ်က အေးမြတဲ့ တောင်ပေါ်မြို့လေးသံတောင်ဆီ🌸 - သျှားသက်မာန် - Thint Aye Yeikအရောင်ရင့်မှတ်တမ်း - ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၆ - kai - kaiCategory	Arts & Humanities